Thenga i-NADP disodium (24292-60-2) hplc≥98% - iWiscepowder
I-NADP disodium, ekwabizwa ngokuba yi-β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt. I-Nic-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, i-coenzyme eyenziwe nge-ribosylnicotinamide 5'-phosphate (NMN) edityaniswa kukudityaniswa kwepyrophosphate kwi-5'-phosphate adenosine 2 ', 5'-bisphosphate. Isebenza njengomphathi we-elektroni ngeendlela ezininzi zokuphendula, zenziwe i-oxidized (NADP +) kunye nokunciphisa (NADPH).
I-NADP disodium (24292-60-2) ividiyo
I-NADP disodium (24292-60-2) Ulwazi olusisiseko
igama I-NADP disodium
Igama leKhemikhali I-β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium ityuwa
Iintetho ezifanayo I-NADP Disodium
I-Nadide phosphate disodium
I-Molecular Formula C21H26N7Na2O17P3
Isisindo somzimba 787.4 g / mol
InChI Key I-WSDDJLMGYRLUKR-WUEGHLCSSA-L
isicelo I-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) kunye ne-NADPH zenza isibini se-redox. I-NADP / NADPH yi-coenzyme exhasa ukusabela kwe-redox ngokuhanjiswa kwee-elektroni kuloluhlu olukhulu lwezicelo, ngakumbi iimpendulo ze-anaerobic ezifana ne-lipid kunye ne-nucleic acid synthesis. I-NADP / NADPH sisibini esine-coenzyme kwiinkqubo ezahlukeneyo ze-cytochrome P450 kunye neenkqubo zokuphendula ze-oxidase / reductase, ezifana ne-thioredoxin reductase / inkqubo ye thioredoxin.
I-NADP disodium (24292-60-2) Inkcazo ngokubanzi
Isicelo seNADP disodium (24292-60-2) Isicelo
I-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) kunye ne-NADPH zenza isibini se-redox. I-NADP / NADPH yi-coenzyme exhasa ukusabela kwe-redox ngokuhanjiswa kwee-elektroni kuloluhlu olukhulu lwezicelo, ngakumbi iimpendulo ze-anaerobic ezifana ne-lipid kunye ne-nucleic acid synthesis. I-NADP / NADPH sisibini esine-coenzyme kwiinkqubo ezahlukeneyo ze-cytochrome P450 kunye neenkqubo zokuphendula ze-oxidase / reductase, ezifana ne-thioredoxin reductase / inkqubo ye thioredoxin.